Zava-misy momba ny psikolojia mahatalanjona 15 Tokony ho Fantatry ny rehetra - An-Tsaina
Mieritreritra ny fahafantaranao ny fomba fiasan'ny tenanao sy ny olon-kafa? Mieritrereta indray rehefa mandinika ny sasany amin'ireo zava-misy mahaliana indrindra sy manokatra ny maso izay mety hanaitra anao fotsiny ianao.
1. Ny ankamaroan'ny fihomehezana dia avy amin'ilay olona miteny
Matetika isika no mieritreritra fa misy ny fihomehezana rehefa maheno zavatra mahatsikaiky isika, saingy ny fikarohana dia naneho fa ireo olona miteny indrindra no mihomehy - 46% kokoa noho ny mpihaino azy - Source .
Ny antony maha-zava-dehibe azy: tsy tokony hieritreritra intsony ianao fa tsy mampihomehy ny olona mihomehy ny vazivaziny. Ary raha te hankafy gigy mihomehy ianao, dia tsara kokoa raha anisan'ny mavitrika amin'ny resaka ianao.
2. Miova ny fahatsiarovantsika isaky ny mahatadidy azy ireo
Ny zavatra heverinao ho fahatsiarovana an'io andro teny amoron-dranomasina io dia sary mihetsika namboarina fotsiny izay miova (indraindray be dia be, saingy amin'ny fomba malefaka) isaky ny mahatadidy izany - Source .
Ny antony maha-zava-dehibe azy: tsy azonao atokisana tanteraka ny fahatsiarovanao raha ny antsipiriany mazava no jerena. Andramo ary tadidio izany, raha tsy misy hafa, rahoviana mifamaly amin'olona momba izay nitranga tamina fotoana manokana.
3. Manantitrantitra ny fiantraikan'ny fientanam-po amin'ny hetsika amin'ny ho avy isika
Tena ratsy toetra isika raha maminavina ny tsara na ny ratsy amin'ny ho avy mety hitranga amintsika. Izy io dia fantatra amin'ny hoe fitongilanana misy fiantraikany ary izany no mahatonga antsika rehetra manonofinofy ny handresy amin'ny loteria ary matahotra ny fahaverezan'ny asa - Source .
Ny antony maha-zava-dehibe azy: raha mino isika fa misy zavatra mety ho tsara lavitra na ratsy lavitra noho ny tena izy, dia afaka mandray anjara amin'ny safidy ratsy ataontsika izany.
4. Ny olona sasany malaina amin'ny lova, fa faly kokoa amin'ny mahazatra
Misy sekolin-tsaina izay manome sosokevitra fa ny olona mirona amin'ny vokatra mety fa tsy manatsara (fantatra amin'ny hoe mahafa-po) dia miafara atiny bebe kokoa miaraka amin'ny safidiny noho ireo izay mitady hampitombo ny lafiny rehetra amin'ny fiainany (fantatra amin'ny anarana hoe maximizers) - Source .
inona no hatao rehefa voampanga diso ianao hoe misoloky
Ny antony maha-zava-dehibe azy: angamba tokony hitsahatra tsy hijery ireo olona heverintsika fa ‘manorim-ponenana’ ho kamo isika ary handinika ny fomba mety hahalalana izany indraindray indraindray ho an'ny fahasambarana.
5. Miankina amin'ny fikarohana vaovao
Ny dopamine neurotransmitter dia mahatonga antsika hahatsapa ho tsara ary sendra izany ny fanosehana antsika hikaroka fampahalalana marobe kokoa, na dia tsy misy tanjona azo ampiharina aza - Source .
Ny antony maha-zava-dehibe azy: mandany fotoana bebe kokoa amin'ny Googling izahay, media sosialy mamelombelona, ​​ary mifatotra amin'ireo tambajotram-baovao noho ny teo aloha, saingy tsy ilaina izany na mahasalama.
6. Ny saina tsy mahatsiaro dia mamaritra ny zavatra efa ela talohan'ny fahatsiarovan-tena
Rehefa miatrika fanapahan-kevitra isan-karazany isika, ny saintsika tsy mahatsiaro tena fantaro mialoha ny fomba rehetra alohan'ny hanombohantsika manao safidy tsara - Source .
Ny antony maha-zava-dehibe azy: matetika kokoa noho izay tsy antsointsika ny fahatsapantsika manao asa tsara tsara amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara ary manao izany izy alohan'ny hahatongavan'ny saintsika tonga saina.
7. Sakafo, firaisana ara-nofo ary loza mitatao eo amin'ny atidohanay
Noho ny fifehezana ny evolisiona an-tapitrisany taona, ny atidohantsika dia toa sarotra ny manombana zavatra toy ny sakafo, vady na fandrahonana. Izany no antony ahitantsika ny sarin'ny sakafo, tolo-kevitra momba ny firaisana ara-nofo, ary loza mitarika ary sarotra be loatra - Source .
Ny antony maha-zava-dehibe azy io: amin'ny tontolon'ny maoderina dia ireo mpivarotra no nanararaotra izany tamin'ny alàlan'ny doka feno sary manintona sy singa mampidi-doza.
naninona i pat mcafee no nisotro ronono
8. Matetika hitantsika izay andrasana ho hitantsika
Tsy misy fomba ahafahan'ny saintsika mahatsiaro mandray ny vaovao rehetra manodidina antsika ary izany dia miteraka fahajambana tsy mitandrina, izay ahitantsika ireo zavatra toa miharihary satria variana amin'ny zavatra hafa isika, na tsy manantena ny hahita ilay anomaly fotsiny isika - Source .
Maninona no zava-dehibe izany: tsy afaka manantena ny ho mailo amin'ny zava-drehetra manodidina antsika isika, ary tsy tokony ho gaga isika rehefa tsy mahita zavatra izay mibanjina tsara ny tarehintsika ny hafa.
9. Ny zava-baovao 3 na 4 ihany no azontsika atao tsindraindray
Ny fahatsiarovantsika amin'ny fotoana fohy dia tsy afaka mitahiry zavatra 3 na 4 indray mandeha ary mila mitazona zava-misy mamelombelona hatrany mandra-pahatonga azy ireo hamorona làlana lavitra kokoa ao an-tsaintsika - Source .
Ny antony maha-zava-dehibe azy: izany no antony mety hanahirana anao hitadidy ny anaran'ny olona segondra vitsy monja taorian'ny nampidirana anao voalohany.
10. Ny ankizy dia tsara kokoa amin'ny fanemorana ny fahafaham-po amin'ny tontolo azo itokisana
Rehefa namerina ny fanandramana malaza Marshmallow ny mpikaroka ary nanampy azy io, dia hitan'izy ireo fa ny ankizy tratry ny tontolo azo antoka dia tsara kokoa amin'ny fanemorana ny fahafaham-po noho ireo izay tratry ny tontolo tsy azo atokisana - Source .
Ny antony maha-zava-dehibe azy: rehefa milaza amin'ny zaza ny ray aman-dreny fa hanao zavatra izy ireo dia tsara kokoa raha manaraka izany na mety tsy hino azy intsony ilay zaza ary tsy ho afaka hanemotra ny fahafaham-po.
11. Fiaraha-miasa mifamatotra amin'ny vondrona iray
Rehefa mandray anjara amin'ny hetsika iray ny vondron'olona iray dia azo inoana kokoa ny hiara-miasa amin'ny asa manaraka, na dia ilaina aza ny fahafoizan-tena ho tombontsoan'ny rehetra. Source .
wwe 2017 mandoa isaky ny hevitra
Ny antony maha-zava-dehibe azy: ny fahazoana vondron'olona hanaraka fombafomba na fitondran-tena manokana dia manangana fatorana izay mety hitarika azy ireo amin'ny fo manontolo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ho avy (na ho tsara na ho ratsy kokoa).
12. Miady amin'ny fifandraisana ara-tsosialy mihoatra ny 150 izahay
Sosokevitra fa sarotra amin'ny olombelona ny manana fifandraisana misy dikany amin'ireo olona mihoatra ny 150 amin'ny fotoana iray, tarehimarika fantatra amin'ny anarana hoe Dunbar's Number - Source .
Ny antony maha-zava-dehibe azy: mety manana “sakaiza” an-jatony, na an'arivony ao amin'ny Facebook ianao, fa rehefa tena fiainana, raha te hanana fifandraisana vaovao ianao, dia mety ho hitanao fa mila mandatsaka ireo efa misy ianao hanome toerana malalaka .
13. Olona mora indrindra manodina fampahalalana atolotra amin'ny endrika tantara
Tsara kokoa amintsika ny mahatakatra ny hevitra sy ny mahatadidy ny zava-misy rehefa ampianarina amin'ny alàlan'ny fitantarana isika fa tsy ny hevitra, ny zava-misy ary ny tarehimarika abstract - Source .
Ny antony maha-zava-dehibe azy: raha manandrana mampianatra lesona manan-danja ny ankizy ianao na mivarotra vokatra amin'ny mpanjifa dia manandrama mampiditra tantara ao anatin'izany.
14. Na ny eritreritra ny fandrosoana aza dia manosika antsika
Matetika, ny hany ilaina mba hanentanana antsika dia ilay fiheverana hoe manao fandrosoana mankany amin'ny tanjontsika isika - Source .
Maninona no zava-dehibe: raha afaka mamitaka ny saintsika hieritreritra isika fa mandroso, dia afaka manosika ny tenantsika hiasa mafy kokoa hanatratra ny nofinofintsika sy tanjontsika.
15. Ny saintsika dia mandany 30% amin'ny fotoana mirenireny
Raha ny mahazatra, ny saintsika dia tsy mifantoka amin'ilay lahasa eo am-pelatanana 30% mampihetsi-po amin'ny fotoana. Fa kosa, izy ireo dia hita mirenireny amin'ny fahatsiarovana sy nofinofy - Source .
Maninona no zava-dehibe: tsy tokony ho gaga na ho tezitra isika rehefa tsy miraharaha ny saintsika - mila mamaky fehezanteny mitovy 5 fotsiny ianao alohan'ny handraisanao azy!
Misy mahaliana anao ve ny iray amin'ireto? Nisy nanaitra anao ve? Mametraha hevitra etsy ambany ary ampahafantaro anay.
Ahoana no tokony hampihenana ny lavo-pitia
rehefa misy lehilahy mijery anao fatratra
inona no hatao rehefa sendra zavatra ratsy
lalao tolona tsara indrindra amin'ny 2016